တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အလွန်များစွာသောကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုကျဆင်းစေပါသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလျော့ကျပြီလော
သုတ်ရည်လွှတ်၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်တစ်ဦးအနှစ်ချုပ်အဘို့ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ: အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြီးစား porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်၎င်းတို့၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုသံသယဝင်စရာမလိုပါ။ ဖိုရမ်များတွင်တင်ထားသည့်အမျိုးသားများက“ များသောအားဖြင့်ဒီလိုပြောတတ်ကြတယ်။ငါ့အလိုရှိသမျှဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု T ကအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်ကျောသာမန်သို့ရောက် လာ. , ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ငါ့ကို Viagra ကိုပေး၏။ "
ပထမ ဦး စွာလူငယ်များတွင် ED သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ porn-induced ED ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးသားများသည်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပုံမှန်တသမတ်တည်းသတင်းပို့ကြသော်လည်း၊ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများအရကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသားများတွင်လည်းအလားတူသော testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုဖော်ပြသည် ရှည်ကြာသော ED (1, 2, 3, 4) ။ ထိုအထဲကနေအောက်တွင်ဆွေးနွေးအများအပြားလေ့လာမှုများ, နှင့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားကျနော်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်သည်
အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းနုပျို ED အတွက်မရှိသလောက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်
သုတ်ရည်လွှတ်၏ကြိမ်နှုန်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမသက်ရောက်ပါတယ်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၌ testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေကြောင်းသုတေသနအထောက်အထားမရှိသေးပါ။ တကယ်တော့, သက်သေ ယေဘုယျအားဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit နှင့် hypothalamus ကို porn-related လက္ခဏာများနှင့် porn-induced လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအဓိကကစားသူအဖြစ်ညွှန်ပြသည်။ ကြည့်ပါ ဒီဗီဒီယို အသေးစိတျအဘို့။
ဤသည်ကအခြားညစ်ညမ်းစေသည့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်လည်ပတ်နေသောဟော်မုန်းများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆေးစွဲသူများသည်မြစ်အောက်ပိုင်းရှိဟော်မုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအကျိုးဆက်ကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ သိပ္ပံ၏လက်ရှိအခြေအနေ:
သုက်ပိုးနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကို Testosterone ဟော်မုန်းမသုံးပါ testosterone ဟော်မုန်း receptors သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက် 3-4 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်လေ့လာရေး abstinence နှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်လွှတ်testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာကိုပြသပါ။
တကယ်တော့စာရေးသူ၏ ဒီလေ့လာမှုက နှင့် ဒီလေ့လာမှုက abstinence နာတာရှည်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဦးတည်သွားစေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးထက်အခြား - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ် abstinence နှင့် plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမျှတသမတ်တည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ် တစ်ရက်ယာယီဆူး (၇) ရက်ဆက်တိုက် abstinstations ပြီးနောက် (အခြေခံထက် ၄၆%) ။ တစ်နေ့တာပြီးနောက် spike testosterone ဟော်မုန်းသည် (၁၆) စမ်းသပ်မှုအဆုံးအထိအခြေခံသို့ပြန်သွားသည်။
သို့သော်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားရှိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation တစ် ဦး အပါအဝင် - မျိုးစုံ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည် အန်ဒရိုဂျင် receptor များအတွက်ကျဆင်း ကာ အီစထိုဂျင် receptors အတွက်တိုးလာ အတော်ကြာဦးနှောက်ဒေသများတွင်။ အပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်များပြန်လည်နာလန်ထူ 7-15 လက်ထက် မှစ. ကြာနှင့်အတော်လေးခြားပြီးစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကနေဖြစ်ပါတယ်။
Porn-ED သွေးသွင်းခြင်းသည် ED testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ခိုင်လုံသောအထောက်အထား၊ မရေမတွက်နိုင်သော ED လေ့လာမှုများနှင့် erectile ဇီဝကမ္မဗေဒအားလုံးကဤအချက်ကိုငြင်းဆိုသည်။ မျိုးဆက်ပွား endocrinology ၏ပါမောက္ခတစ် ဦး မှဤဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ Hypogonadal ယောက်ျားနဲ့စိုက်ထူ
တစ်ဦးထက်အခြား - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ် abstinence နှင့် plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမျှတသမတ်တည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ် တစ်ရက်ယာယီဆူး (၇) ရက်ဆက်ပြီး abstinstations ပြီးနောက် (၄၆% ရာခိုင်နှုန်း) ။ ကျယ်ပြန် အထီး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတက်အကျ (10-40%) သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
teststones ဟော်မုန်းတိုးခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်အထောက်အထားမရှိပါ။ လေ့လာမှုနှစ်ခုကသာရေရှည် abstinstin ကာလအတွင်း T အဆင့်ကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီးနှစ်ခုလုံးကပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါ
နာမည်ကျော်ကြားသူ တရုတ်လေ့လာမှု တိုင်းတာ T ကအဆင့်ဆင့် 16 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့တိုင်းနှင့်နေ့6အထိတိုင်အောင်အနည်းငယ်တိုးတက်တွေ့ရှိခဲ့ - နှင့်စမ်းသပ်မှုအဆုံးသတ်သည့်နေ့ 8 မှနေ့က 16 ကနေအခြေခံ (အနည်းငယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) မှပြန်လာ။
ဤ ြဒပ်မဲ့သော - တစ်ဦး 3-ရက်သတ္တပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence အောက်ပါကျန်းမာယောက်ျားအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်မှ endocrine တုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှုများကို ၃ ပတ်ကြာသုက်ပိုးမွှားခြင်းမပြုလုပ်သောကြောင့်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းတိုးစေကြောင်းသက်သေပြသည်။ မထားဘူး စိတ္တဇမှဤဝါကျသည်အသုံးအနှုန်းညံ့ဖျင်းပြီးလှည့်ဖြားသည် -ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအော်ဂဇင်အားဖြင့် unaltered ခဲ့ပေမယ့်, ပိုမိုမြင့်မား testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု abstinence ၏ကာလအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်“ ထဲမှာ အပြည့်အဝလေ့လာမှု, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အတူတူပါပဲ။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းဂရပ်စစ်ကြော C on 379 စာမျက်နှာ။ ရုပ်ရှင်စတင်ချိန်တွင် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ (၁၀ မိနစ်အမှတ်အသား) သည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်တူညီကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။ စိတ္တဇရှိရှုပ်ထွေးသောဘာသာစကားသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ် testosterone ဟော်မုန်းကွဲပြားမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်, T-level ကိုကြိုတင် abstinence တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session များအတွက်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၁ ရက် abstinstence ပြီးနောက်, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင် T-level သည် ၁၀ မိနစ်အခြေခံနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ အဆိုပါကြေညာချက် -ပိုမိုမြင့်မားသော testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု abstinence ၏ကာလအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်"- ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ကြည့်ရှုခြင်းတို့တွင် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည်မကျဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သုတေသီများက porno ကြည့်ခြင်းကိုစောင့်မျှော်ခြင်း (နောက်ဆုံးတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တိုးပွားလာခြင်း) သည် testosterone ဟော်မုန်းကိုကြည့်ရှုစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမြင့်တက်စေခဲ့သည်။
ကြွက်လေ့လာမှုများ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု" သို့သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းတသမတ်တည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤလေ့လာမှုများသည် ၁၅ ရက်အထိတိရိစ္ဆာန်များကိုလေ့လာသည်။ သို့သော်သူတို့ကအန်ဒရိုဂျင် receptors လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် (dopamine ပိတ်ဆို့ထားသည့် estrogen receptors & opioids) တိုးပွားလာခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲခြင်းများအပါအ ၀ င် limbic system အတွင်းအပြောင်းအလဲများစွာကိုရှာတွေ့သည်။
ရေရှည် မျောက်ဝံများအပေါ်လေ့လာမှုများ သုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အသွေး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားအဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။
စကားမစပ် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် ပုံမှန်အားဖြင့် 10-40% မှသာအတက်အကျ။
ဤ တစ်ခုတည်းလေ့လာမှု အချို့သောဘာသာရပ်များအတွက်၊ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှစ၍ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်လေ့လာမှုအရ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားမှုသည်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ နည်းနည်းဆန့်ကျင်။ ဤလေ့လာမှုကိုအခြေအနေတွင်ထားပါ။ ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပုံတူကူး။ မရသောမရေမတွက်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသော variable များပါ ၀ င်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုကြိမ်နှုန်း၊ asstinence၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ကိုစစ်ဆေးသောအခြားတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအားလုံးသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုငြင်းဆိုသည်။
အနီးကပ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးနှင့် Bond အပြုအမူတွေ, လိင်ဆက်ဆံသူ့ဟာသူကဲ့သို့သော, ဒါကြောင့်အထီးကျန်သို့မဟုတ်အခြား, စုစုပေါင်းသာယာဝပြောရေးကိုတိုးမြှင့် လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှုထောင့် မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သည်သွယ်ဝိုက်ပီဂနြသို့မဟုတ်ဆဲလ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲအခြားအချက်များကနေတဆင့်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဖိနှိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှု visitors ည့်သည်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ anabolic steroids တွေအကြောင်းပါ။ မှတ်ချက်။ ။ Steroid အသုံးပြုသူသည်စတီးရွိုက်ဆေးစွဲနိုင်သည်။ ကြွက်များနှင့်စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်သည်ပင်သူတို့၏ပုံသဏ္aboutာန်ကိုဂရုမစိုက်သောကြောင့် anabolic steroids ကိုစွဲလမ်းစေသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုချိတ်ဆက်ထားသောကြွက်သားများကိုထိန်းသိမ်းရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့် လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတားစီး။ သတိထားပါ။
မေးခွန်း: မင်း HRT ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့တာလဲ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာက erectile တစ်သျှူးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲစေပြီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စာပေတွေများလာတယ်။ အကယ်၍ သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သည်ဟုအတည်ပြုပါက၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိအခက်အခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, erectile တစ်သျှူး၌ဤအပြောင်းအလဲများ HRT နှင့်အတူအကြီးအကျယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူမှုတိုးတက်လာဖို့အတွက် testosterone ဟော်မုန်းပုံမှန်အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်တာကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာချောမွေ့တဲ့ကြွက်သားထဲမှာတကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘဲ၊ စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့်သင့်အသက်အရွယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာစိုက်ထူနေရတဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာကုသခဲ့ရပြီးပြီလဲလို့မေးမလား။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်သည် HRT တွင် ၂ နှစ်နေရသည်။ အခုအသက် ၄၀ ရှိပါပြီ ငါနှစ်ပေါင်း2တစ် Semi- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစွမ်းသတ္တိအားကစားသမားဖြစ်ရပြီ။ အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းငါ anabolic steroids (AAS) ကိုမကြာခဏအသုံးပြုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ AAS ဆေးကိုရပ်တန့်သွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ကျရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်နှစ်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ endogenous testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည်မတည်ရှိသေးပါ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်က၊ ငါ့စိုက်ထူမှုအရည်အသွေးကမကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ AAS အပေါ်နှင့် off အခါနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ HRT စဉ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ ED ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ reboot တစ်ခုကကျွန်တော့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ အခုငါ၌ရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုငါမသိရ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု LH bioavailability ၏ Reversible လုပ်လျော့ချရေးအတွက်ရလဒ်များ။
int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2002 ဧပြီ; 14 (2): 93-9; ဆွေးနွေးမှု 100 ။
Carosa E ကို, Benvenga S က, Trimarchi က F, Lenzi တစ်ဦးက, Pepe M က, Simonelli ကို C, Jannini EA ၏.
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့လူနာသိသိသာသာလျှော့ချသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း (T) ကိုအဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ nonhormonal ကုထုံးအမျိုးမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပွနျလညျထူထောငျတျောမူသောအတွက်ပညာရေး၏ etiology ၏လွတ်လပ်သောခဲ့သောဤ hypotestosteronemia ၏ယန္တရား, သာလူနာအတွက်၎င်း၏ပြောင်းပြန်နားလည်စေရန်, ကျနော်တို့ (ED လူနာများ၏တူညီသောဆောင်များတွင်အတွက်သွေးရည်ကြည် luteinizing ဟော်မုန်း (LH) တိုင်းတာ ဎ = 83;) 70% nonorganic, 30% အော်ဂဲနစ်။ immunoreactive LH (ကျနော်-LH) နှင့် bioactive LH (B-LH) နှစ်ဦးစလုံးကုထုံးပြီးနောက် entry ကိုနှင့်3လအတွင်းမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ကို (တစ်လလျှင်လိင်ဆက်ဆံမှု၏အောင်မြင်သောကြိုးစားမှု၏ဆိုလိုသည်မှာနံပါတ်) အပေါ်အခြေခံပြီး, လူနာအပြည့်အဝနအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည် (အမည်ရအနည်းဆုံးရှစ်ကြိုးစားမှု; ဎ = 51), တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းန (အနည်းဆုံးတဦးတည်းကြိုးပမ်းမှု; ဎ = 20) နှင့် Non-န (ဎ = 16) ။ ED မရှိသောကျန်းမာသောအမျိုးသား ၃၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလူနာ ၈၃ ယောက်တွင်အခြေခံ B-LH (ဆိုလိုသည်မှာ +/- sd) လျော့နည်းသွားသည်။ (၁၃.၆ +/- ၅.၅ နှင့် ၃၁.၇ +/- ၆.၉ IU / L, P <30) သည် အနည်းငယ်တိုးသော်လည်းပုံမှန်အကွာအဝေးတွင် I-LH (83 +/- 13.6 vs 5.5 +/- 31.7 IU / L, P <6.9)၊ အကျိုးဆက်အား B / I LH အချိုး (0.001 +/- 5.3 vs 1.8 +/- 3.4, P <0.9) လျော့နည်းသွားသည်။ သွေးရည်ကြည်ကို T ဘို့ငါတို့အရင်လေ့လာဆင်တူ, သုံးယောက်ရလဒ်ကိုအုပ်စုများအခြေခံမှာဤသုံးပါး parameters များကိုမဆိုဘို့သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ရလဒ်အုပ်စုများကုထုံးပြီးနောက်ကွဲပြားပါတယ်။ LH ၏ Bioactivity အပြည့်အဝနအတွက်သိသိသာသာတိုးပွားလာ (pre-therapy=13.7+/-5.3, post-therapy=22.6+/-5.4, P<0.001), ကြိုးနှံစှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနအတွက် (၁၄.၈ +/- ၆.၉ против ၁၇.၂ +/- ၇.၀၊ P <14.8) ဒါပေမယ့် Non-နအတွက်မပြောင်းလဲရှိနေဆဲ (11.2 +/- 2.2 vs 12.2 +/- 5.1) ။ I-LH နှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ (5.2 +/- 1.7 vs 2.6 +/- 5.4, P <0.001; 5.4 +/- 2.2 vs 4.0 +/- 1.7, P <0.05; 5.6 +/- 1.2) အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်သို့သွားခဲ့သည်။ vs 5.0 +/- 1.2, အသီးသီး) နှင့် B / I အချိုးအတွက် B-LH ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်း (3.7 +/- 4.1 vs 11.8 +/- 7.8, P <0.001; 4.2 +/- 4.3 vs 5.8+ /-4.2, P <0.05; 2.1 အသီးသီး + 0.7 +/- 2.6 အသီးသီး) 1.3 +/- XNUMX ။ ကျနော်တို့ ED လူနာများ၏ hypotestosteronemia LH ၏ချို့ယွင်း bioactivity ကြောင့်ကြောင်းကို hypothesize ။ ဤသည်ကိုလျှော့ချ bioactivity Reversible လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြန်လည်စတင်မသက်ဆိုင်သည့်ကုထုံးနည်းလမ်း၏အောင်မြင်ကြောင်းဖြစ်သည်။ pituitary ဟော်မုန်း biopotency အဆိုပါ hypothalamus ကထိန်းချုပ်ထားသည်ကို ထောက်. , LH hypoactivity လွှဲမရှောင်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းလိုက်နာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်မှဆက်စပ် hypothalamic functional ဖြစ်စေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သင့်.
comments: Authors succesful လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ED များအတွက် treted ယောက်ျားအတွက် LH နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ tye ယောက်ျား၏အဘယ်သူမျှမဟော်မုန်းတွေနဲ့ကုသနှင့်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေး၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတှငျစစျမှနျသောလျှင်ဤလိင် / သုတ်ရည်လွှတ် testoterone အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းမှုတားဆီးစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
MALE ကြွက်များအတွင်းလိင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ PHARMACOLOGICAL နှင့်ဇီဝကမ္မ aspect
Scand J ကို Psychol ။ 2003 Jul;44(3):257-63.
Fernandez-Guasti တစ်ဦးက, Rodriguez-Manzo G. အ
ပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စဉ်အပေါ်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်သုံးသပ်ပြီး။ 1956 အတွက် Knut Larsson ထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်ထိပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလေ့လာသည်အောက်ပါရလဒ်များကိုတွေ့ပြီ။
အခြားတတိယသူတို့မရပြန်ရာကနေတစ်ခုတည်း ejaculatory စီးရီးပြသနေစဉ် (1) ကြော်ငြာ libitum သုတ်ရည်ထိ4နာရီအကြာတွင်တစ်နေ့မှာလူဦးရေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြည့်စုံတားစီးပြသခဲ့သည်။
2-Oh-DPAT, yohimbine, naloxone နှင့် naltrexone အပါအဝင် (8) အများအပြား pharmacological ကုသမှုသည်, noradrenergic, serotonergic နှင့် opiate စနစ်များကိုဤဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုညွှန်ပြ, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သော reverse ။ အမှန်စင်စစ်တိုက်ရိုက် neurochemical ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသော neurotransmitters ပြောင်းလဲမှုများပြသခဲ့သည်။
(3) အလုံအလောက်ဆွပေးသော, ထိုလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီးပြောင်းလဲနေတဲ့အသုံးပြုပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်အကြံပြုခြင်း, တားဆီးခဲ့သည်.
(4) အဆိုပါဂါဘမြို့သားရန် bicuculline ဒါမှမဟုတ် medial preoptic ဧရိယာ၏လျှပ်စစ်ဆွ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ် reverse ခဲ့ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဒေတာ, တလက်ပေါ်, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် (bicuculline အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ရှည်သော) အ postejaculatory ကြားကာလဟာ medial preoptic ဧရိယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောထိန်းညှိမထားဘူးအကြောင်း, အလားတူယန္တရားများကကမကထပြုခဲ့ခြင်းနှင့်, အခြားအပေါ်ကြသည်မဟုတ်အကြံပြုပါသည်။
(5) အနီးကပ်ထိုကဲ့သို့သော medial preoptic နျူကလိယအဖြစ်ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင် receptor သိပ်သည်းဆ, အကြီးအကျယ်လိင်မောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့သောလျှော့ချရေးအခြို့သောဦးနှောက်ဒေသများသို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီးနှင့်အန်ဒရိုဂျင်၏အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤရလဒ်သည်ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptors ပြောင်းလဲမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စုပ္ပန်၏တားစီးဘို့အကောင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
(6) ကြော်ငြာ libitum သုတ်ရည်ထိ4နာရီအကြာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို4ရက်အကြာမှာ, ယောက်ျားကသာ 63%7ရက်အကြာမှာအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ copulatory လှုပ်ရှားမှုဖော်ပြရန်စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြသနိုင်ကြသည်, ထိုထုတ်ဖော်ပြသ.
comments: အဲဒီ receptor တစ်စက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လုံးကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အလွန်ဆင်တူဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ testosterone ဟော်မုန်း receptors ၌ဤတစ်စက်လူ့အထီးထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေလျှင်မိမိတို့၏ testosterone ဟော်မုန်းများလွန်းမကြာခဏသုက်လွှတ်ပြီးနောက်နိမ့်သည်, မိမိတို့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် abstinence တဲ့ကာလနှင့်အတူမြင့်တက်တူသောအဘယ်ကြောင့်သူတို့ခံစားရတူသောလူတခြို့ခံစားရဘာကြောင့်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။
မှတ်ချက်: ဒီယာယီအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံမှန်ဦးနှောက်ထဲမှာတိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ သင့်ဦးနှောက်ကြောင့်စွဲဖို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပါက, သင့် dopamine အတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာ testosterone ဟော်မုန်း receptors အတွက်ယာယီကျဆင်းမှုကနေလည်း dysregulated ဖြစ်ပြီး, သငျသညျပုံမှန်လိင်စိတ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ပိုရှည်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်: #4- အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဝတ္ထု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောအရာဖြစ်တယ်) ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတားဆီးခဲ့သည်။
လိင်ဝကြွက်များ၏ forebrain အတွက်တိုးမြှင့်အီစရိုဂျင် receptor alpha immunoreactivity ။
Horm ပြုမူနေ။ 2007 မတ်လ; 51 (3): 328-34 ။ EPub 2007 ဇန်နဝါရီ 19 ။
Phillips က-Farfán BV, Lemus AE, Fernandez-Guasti တစ်ဦးက.
estrogen receptor alpha (ERalpha) အဓိက limbic စနစ်တည်ရှိသောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neuroendocrine စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်။ အမြားအပွားမျိုးစိတ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအဖြစ်လူသိများအများအပြားသုက်ပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုရေရှည်တားစီး, ကိုတင်ပြ။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင် receptor သိပ်သည်းဆမွတ်မပြေနိုင်သောရန်တစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် 24 ဇလျှော့ချကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ, နျူကလိယ accumbens နှင့် ventromedial hypothalamus ၌တည်၏။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ERalpha ၏သိပ်သည်းဆလည်းမွတ်မပြေနိုင်သောရန်တစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် 24 ဇပြင်ဆင်ခဲ့သည်လျှင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်တယ်။ လိင်မွတ်မပြေနိုင်သောတစ်ခုတိုးလာ ERalpha သိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် အဆိုပါ stria terminalis ၏ anteromedial အိပ်ရာနျူကလိယ (BSTMA), ventrolateral septum (LSV), posterodorsal medial amygdala (MePD), medial preoptic ဧရိယာ (မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်) နှင့်နျူကလိယ core ကို (NAc) accumbens ။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည့် BSTMA နှင့် MePD အတွက် ERalpha သိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ERalpha အဆိုပါ arcuate အတွက်သိပ်သည်းဆ (Arc) နှင့် ventromedial hypothalamic အရေးပါ (VMN) နှင့်သွေးရည်ကြည် estradiol အဆင့်ဆင့်မွတ်မပြေတသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်မပြောင်းလဲ 24 ဇနျြရစျ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလွတ်လပ်စွာစနစ်တကျလည်ပတ်အတွက် estradiol အဆင့်ဆင့်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့တိကျတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် ERalpha ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်ခုတိုးအကြားဆက်ဆံရေး, အကြံပြု.
comments: အီစရိုဂျင်သိပ်သည်းဆတစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါအများအပြားဒေသများတွင်တိုးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သော receptors ။ အပြည့်အဝလေ့လာမှုမှာသူတို့ကဒီပြောင်းလဲမှုကိုပိုရှည် 24 နာရီထက်ကြာအကြံပြုအပ်ပါသည်။